Masashi Wakui wuxuu ina tusayaa aragtidiisa jidadka Tokyo | Abuurista khadka tooska ah
Sawirada habeenkii sixirka ah ee wadooyinka Tokyo ee Masashi Wakui
Haddii mid ka mid ah taxanahan sawirradu uu sii jiro ku dhexjiray diirimaadka nalalka neon iyo waxyaabo gaar ah oo reer magaal ah, hubaal waxaad u maleyneysaa inaad fiirineyso shaqo kale oo farshaxan dijitaal ah oo qoto dheer qoto dheer taasna waxay u qaadaneysaa hyperrealism heer kale.
Laakiin marka qofku bilaabo inuu ka raadi faahfaahin dheeraad ah qabashada la qabtay oo wuxuu la kulmaa dadka, sida jilayaasha kaqeyb qaadanaya qaab dhismeedkaas magaalo, wuxuu bilaabayaa inuu ogaado inuu isagu kahoreeyay shaqo heer sare ah oo ku saabsan dhanka sawir qaadista oo uu sameeyay Masashi Wakui.
Sawirro ay u muuqato in HDR (heer sare oo firfircoon) ay sameysay waxkeeda si ay u soo qabato waxa inta badan ka dhaca waddooyinkaas Tokyo. Tiro taxane ah oo uu qaaday sawir qaade Masashi Wakui taas u eg sawirro badan oo ka socda filim anime ah ama mid ka mid ah buugaagta farshaxanka manga ee aan ka heli karno mid ka mid ah dukaamada khaaska ah.
Wakui runti wuxuu sixirka jidadka Tokyo u keenayaa sawirro taxane ah oo mid kasta oo iyaga ka mid ah ay ku dhegan tahay jawigaas oo la ururin karo marka ay qorraxdu dhacdo ee nalalka waddooyinka ee caanka ah ee Japan ay bartanka u galaan daadad nook kasta oo leh laydhkiisa iftiinka iyo geeska u gudbiya dareenkaas nostalgic-ka ah wax duug ah oo casri ah isla markaa.
Sidii ay qayb uga ahaayeen mid ka mid ah toogasho ka socota filimka sayniska ee Blade Runner, Wakui wuxuu qaataa neon muujinta ugu badan ee mid kasta oo ka mid ah si loo abuuro xitaa jawi gebi ahaanba isdaba marin Waxay isticmaashaa kaamirooyinka waxqabadka sare leh waxayna badalaysaa midabka si ay uga dhigto mid aad u muuqda oo leh dareenkaas sixirka mid kasta oo ka mid ah muuqaalka nolosha magaalada ee habeenkii.
Waxaad leedahay tiisii Flickr y Twitter awoodaan raac wadada sawir qaade aad u fiican.
Hadaad rabto inaad la kulanto hooyo wadata iphone-keeda iyo tayadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawirada habeenkii sixirka ah ee wadooyinka Tokyo ee Masashi Wakui
Dhaqanka caadiga ah ee Jabbaan ee gacanta Yoshitoshi weyn
Naqshadaynta Sirdoonka: 31 Waa Inuu Lee Lee logos